အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ပြုပြင်ပြောင်းလဲရန် သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် ပြော | ဧရာဝတီ
ရန်ပိုင်| December 26, 2012 | Hits:8,369
| | အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များသို့ သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် မိန့်ခွန်းပြောကြားနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ – သမ္မတရုံး)
အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားအတွင်း စီမံခန့်ခွဲမှုကျဆင်းနေပြီး အဂတိလိုက်စားမှုများ ဖြစ်ပေါ်နေခြင်းသည် ပြည်သူများအတွက် အခက်အခဲဖြစ်စေသည်ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ယနေ့နံနက် တိုင်းပြည်သို့ ထုတ်လွှင့်သည့် မိန့်ခွန်းတွင် ပြောဆိုလိုက်သည်။
သက်တမ်း ၂ နှစ်နီးပါးရှိ အစိုးရအတွင်း ပြည်သူနှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့ဆက်ဆံရသော ဌာနဆိုင်ရာများ၊ မြို့နယ်၊ ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအဆင့် ဒေသအာဏာပိုင်များ၏ လုပ်ဆောင်မှုများမှာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိသည့်အပြင် ပြည်သူ့သဘောထားကို လျစ်လျူရှုပြီး မိမိဆန္ဒအတိုင်း ဆောင်ရွက်ကာ တာဝန်ယူဖြေရှင်းမှု၊ ဥပဒေနှင့်အညီ စီမံအုပ်ချုပ်မှု မရှိခြင်းများ ဖြစ်ပေါ်နေကြောင်း၊ ထို့အတွက် နောက်ဆက်တွဲ အဂတိလိုက်စားမှုများ ဖြစ်ပေါ်စေကာ အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရား၌ နှောင့်နှေးကြန့်ကြာမှု အခက်အခဲများ ရှိလာကြောင်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန် က ပြည်ထောင်စု ၀န်ကြီးများနှင့် တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်အစိုးရအဖွဲ့ဝင်များ၊ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများကို ပြောဆိုလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်။
ထို့အတွက် အောက်ခြေ ရပ်/ကျေးအဆင့်မှ အထက် ပြည်ထောင်စု အဆင့်အထိ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာ အတွေးအမြင်၊ အမူအကျင့်၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများကို ပြောင်းလဲရမည်ဟု သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ဆိုသည်။
လာဘ်ပေးလာဘ်ယူမှုများကိုလည်း အမျိုးသားအကျင့်စာရိတ္တ မထိခိုက်စေရန် ထိန်းသိမ်းရမည်ဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်သော အုပ်ချုပ်ရေးစနစ်နှင့် သန့်ရှင်းသော အစိုးရဖြစ်ရန်လိုကြောင်း ထည့်သွင်းပြောဆိုသွားသည်။
ဤမိန့်ခွန်းသည် အစိုးရ၀န်ထမ်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ဒုတိယအကြိမ် ပြောဆိုခြင်းဖြစ်ပြီး၊ ၀န်ထမ်းများ အဂတိလိုက်စားမှုနှင့် လူထုဆက်ဆံရေး ချောမွေမှု မရှိခြင်းများကို မကြာခဏ ထည့်သွင်းပြောဆိုသော်လည်း သိသာသော ပြောင်းလဲမှုများ မတွေ့ရသေးကြောင်း ဝေဖန်မှုများ ရှိသည်။
မန္တလေးတက္ကသိုလ် ဆရာများသမဂ္ဂမှ အတွင်းရေးမှူး ဆရာ ဦးသုတက “သမ္မတ မိန့်ခွန်းက လက်ခံတယ် ကြိုဆိုတယ်၊ ဒါပေမယ့် အောက်ခြေ၀န်ထမ်း ပြောင်းလဲဖို့က လွယ်ပါတယ်၊ ထိပ်ပိုင်းပြောင်းဖို့သာ ခက်တာလို့ ထင်တယ်” ဟု ဆိုသည်။
အစိုးရသက်တမ်း ၂ နှစ်နီးပါး ရှိပြီဖြစ်သော်လည်း မိမိတို့ မိခင်ဌာနဖြစ်သည့် ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနတွင်ပင်လျှင် ၀န်ကြီးကိုယ်တိုင် ၀န်ထမ်းအပြောင်းအရွေ့၌ ဘက်လိုက်မှုများ၊ ၀င်ရောက်စွက်ဖက်မှုများ ပြုလုပ်နေပြီး ပွင့်လင်းမြင်သာမှုများကို မတွေ့ရှိရကြောင်း ဆရာ ဦးသုတက ဥပမာပေးသည်။
သမ္မတ၏ မိန့်ခွန်းတွင် ရပ်ကွက်၊ ကျေးရွာအဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ခန့်ထားရာတွင် ရပ်/ကျေး ကော်မတီများ ဖွဲ့စည်းပြီး တိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်သင့်ကြောင်း၊ သို့မှသာ ပြည်သူများ မလိုလားသည့် ပြဿနာများ လျော့နည်းမည်ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသွားသည်။
မကြာသေးမီက ရပ်ကွက်ကျေးရွာ အဆင့် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ ရွေးချယ်ရာတွင် အဂတိလိုက်စားသည့် ပြဿနာများစွာ ထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။
နိုင်ငံဖွံဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို သာမန်စီမံရုံဖြင့် မဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်း၊ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှု အောင်မြင်အောင် အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား စီမံလုပ်ကိုင်မှု ထိရောက်ထက်မြက်ရန်လိုကြောင်း၊ ယခင် အတွေးအမြင် လုပ်နည်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်၍ မရတော့ဘဲ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမြင့် အမြင်များ ရှိရန်လိုကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်း ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်းလည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။
ကြွေးကြော်သံ ဆိုင်းဘုတ်တွေကြား ပိတ်မိနေတဲ့ မြန်မာပြည်၁၉၈၂ နိုင်ငံသား ဥပဒေ ပြင်ဆင် ရေးဆွဲရန် အစီအစဉ်မရှိသေးမန္တလေး - မြစ်ကြီးနား ရထား အချိန်များ ပြောင်းလဲသတ်မှတ်လယ်မြေ သိမ်းဆည်းခံရမှု စုံစမ်းရေးကော်မရှင် တိကျစွာဖြေရှင်းရန် လိုအပ်
sailay December 26, 2012 - 6:01 pm (တခါပြောလဲသူမသိ၊နှစ်ခါပြောလဲသူမသိဆယ်ခါပြောတောင်သိမည့်သူတွေမဟုတ်ပါဘူး)မျက်၇ိပ်ပြလို့ သူမသိ
ထိမှနာ-နာမှသိတဲ့ သမတ ကြီး၇ယ်ပြောမနေပါနဲ့ တော့လေကုန်ပါတယ်၊ဒုတ်မပါ၇င် အဟုတ်အမှန်တကယ်လို့ 
သူတို့ ထင်ကြမှာမဟုတ်ဘူး(ဆွဲစိ၊ဆွဲဆန့် )အပြောနဲ့ လက်တွေ့ တထပ်ထဲကျအောင်လုပ်လိုက်ပါတော့ကြာလေ
ReplyaDecember 26, 2012 - 6:30 pm အောက်ခြေကတော့ရဲရဲတင်းတင်းကိုလုပ်ချင်တိုင်းလုပ်နေကြတာပါ၊တိုင်ခဲ့ရင်လည်းဒုက္ခအမျိုးမျိုးပေးပြီးနှိပ်ကွပ်တော့တာပါ။အထက်ကလည်းဒီအတိုင်းကြည့်နေတာပါ။သမ္မတကလူကြားကောင်းအောင်ပြောတတ်လုပ်တတ်တာကလွဲလို့ဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးရုပ်သေးသက်သက်ပါ။တကယ်စေတနာပါခဲ့ရင်မှားတဲ့သူကိုထိထိရောက်ရောက်အရေးယူလိုက်ရုံပါပဲ၊သမ္မတကအဲဒီလိုလုပ်နိုင်တဲ့အခြေအနေ၊အဆင့်မရှိပါဘူး။
Reply soe min December 26, 2012 - 7:43 pm အစိုးရအဖွဲ့အစည်းထဲမှာ တပ်ကလူတွေရှိနေတာကိုဘယ်သူမှ မကြိုက်ဘူး
ဒါကိုပြန်မထုတ်ပဲ ဆက်သွားနေရင်သမတကြီးမျှော့်သလို ဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး
Reply Orisin Swetmarden December 26, 2012 - 9:15 pm သမ္မတကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းကိုထောက်ခံပါတယ်၊ ဒါပေမဲ့ဒုတိယအကြိမ်ပြောတာဆိုတော့တတိယအ ကြိမ်လည်းပြောရအုံးမှာလားလို့ယူဆနိုင်ပါသေးတယ်၊ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွေကို အပေါ်ကစပြီးထင်ထင်ရှား ရှားပြောင်းလဲမှအောက်ကလိုက်လာမယ်လိုထင်မိပါတယ်။
Reply pps၁၂၃၄၅ December 26, 2012 - 9:33 pm ငွေများ (သို့) လူကြီး ဝိတ်သုံး သော လူများ ကို ဖားယား အကျိုးဆောင် ပေးတတ် သော တရားရေး ဝန်ထမ်းများ၊ လူကြီးများ နှင့် ရင်းနှီးသော သူများကို မဖမ်းပဲ မရှိမဲ့ ရှိမဲ့များကို သာ ဖမ်းသည့် ကာစတန်များ၊ မီဒီယာ ထောင်ကာ ကိုယ်ကျိုးရှာသူများ၊ လူကြီးနှင့် ရင်းနှီးသော ကုန်သည်များကို အထူးအခွင့် အရေးပေး တတ်သော ပြည်တွင်း အခွန်များဦးစီး ဝန်ထမ်းများ၊ ဆန္ဒပြသူများကို သာ နှိပ်ကွပ်တတ်ပြီး သူခိုးများ နှင့် မှောင်ခိုကုန်သည်များကို မဖမ်းသော ပြည်သူ့ရဲများ၊ လူကြီးများ နှင့် ရင်းနှီးသော ကုန်သည်များကို အထူး အခွင့်အရေးများ ပေးကာ တင်ဒါမခေါ်သော ဝန်ထမ်းများ၊ လူကြီး နှင့် ရင်းနှီးသူများကို အထူးအခွင့်အရေးများပေးကာ တစ်တောလုံးကုန်အောင် ခုတ်ခိုင်းသော ဝန်ထမ်းများ၊ လူကြီးနှင့် ရင်းနှီးသူ များကို သာ လုပ်ကွက်မျာ ချပေးသော သတ္တုတွင်း ဝန်ထမ်းများ စသော ဝန်ထမ်း အားလုံးကို အရေးယူပေးပါ သမ္မတကြီးခင်ဗျား။
Reply U Thi Ha Tint Swe December 27, 2012 - 2:51 am U Thein Sein should reform early his 1/4 Myanmar Junta Regime and his 08-constitution too with global democratic norms!
Reply အောင်အောင် December 27, 2012 - 7:30 am ပြောတာကတော့ပြောတတ်ကြပါတယ်။နားထောင်ရဲဖို့ပဲလိုပါတယ်။(ဝန်ထမ်းတွေအပါ အဝင်။ပြည်သူ အသံတွေကိုပါနားထောင် ရဲဖို့ ပါ)
အံတီစု ပြောသလို တရားမျှတမှူ ရှိဖို့ လိုပါတယ်။ သမတ အပါအဝင်ပေါ့။
Reply Salai Lian December 27, 2012 - 7:40 am Yes. The most important thing is to make amendments on 2008 constitution which is stumbling block to bring improvement. If Thein Sein is serious enough, he must replace this fake constitution drafted by Than Shwe’s people with the real constitution drafted by representatives elected by the citizens. The current government is on the sand or on the mud. We want to see our Union built on solid foundation. As long as the nation is underapoor law, there is no way the government can enforce effectively. Then, corruption will go on and on.
Reply tin tun December 27, 2012 - 8:28 am ပြောတောပြောတာဘဲ
Reply sunny December 27, 2012 - 8:36 am နိုင်ငံဖွံဖြိုး တိုးတက်မှု လုပ်ငန်းစဉ်များကို သာမန်စီမံရုံဖြင့် မဖြစ်ထွန်းနိုင်ကြောင်း၊ လက်တွေ့အကောင်အထည်ဖော်မှု အောင်မြင်အောင် အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရား စီမံလုပ်ကိုင်မှု ထိရောက်ထက်မြက်ရန်လိုကြောင်း၊ ယခင် အတွေးအမြင် လုပ်နည်းအတိုင်း ဆောင်ရွက်၍ မရတော့ဘဲ ဒီမိုကရေစီ ကျင့်စဉ်နှင့် လိုက်လျောညီထွေရှိမြင့် အမြင်များ ရှိရန်လိုကြောင်း၊ ထို့အပြင် ဝန်ကြီးဌာနအချင်းချင်း ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှု အားနည်းကြောင်းလည်း သမ္မတ ဦးသိန်းစိန်က ထည့်သွင်းပြောကြားသွားသည်။
You are reponsible for your cabinet fuctionality and performence. There are no actions from you for anti-corruption and rule of law at this moment. Don’t mention about peace and national reconcilation.
Even china, they take actions for those civil servents who are corrupted and poorly underperformed. In Myanmar, There arealot of talks, but no actions at all. Appoint the right people (Techocrafe) at the right positions , not ex millitary personnels( Because they don’t have brains to think like ordinary person).
Reply ဌေးဝင်း December 27, 2012 - 8:38 am သမတကြီး၇ယ်……အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားဆိုတာ…အခုမှဖြစ်လာတဲ့….. အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားမဟုတ်ပါဘူး…..သမတကြီးကိုယ်တိုင်ပါဝင်ခဲ့….စစ်အစိုး၇အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရားပါ……..အခုမှ…မသိချင်ဆောင်ပြီး……ပြောမနေပါနဲ့……အပြောကတော့….သိန်းစိန်ပါဘဲ..ဖြစ်နေမယ်နော်။။။
Reply myat December 27, 2012 - 12:11 pm ကြိုတင်မဲ နဲ့ တက်လာတဲ့ သမတကြီးပါကွ မသိချင်ယောင်ဆောင်စရာလား-ဟားx1000
Reply htoohtoo December 27, 2012 - 9:08 am talk so good work losy
every one can talk
use fire bomb talk smoke bomb
goverment cannot support one monk hospitalise cannot support
mg aye hospital in singapore is ok support where he get money peoples money
now in sentosa
thein sein group also ahlibaba group leader than shwe
Reply thuratun December 27, 2012 - 10:00 am ကောင်းစေချင်လျှင် စစ်သားအရေခွံချွတ်၊လုံချည်ဝတ်ထားတဲ့ ပြည်ထောင်းစုဝန်ကြီးအားလုံး
Reply mathae myin December 27, 2012 - 10:15 am Uncle thein sein scaring due to DASSK says to beaPresident.
Reply haymar December 27, 2012 - 10:34 am Good sounds, but it becomes real?
We do not trust yet, but we cannot wait the long story.
We would like to amend the 2008 Constitution due to this is covering
a lot of chances for Military and their partners’ corruption.
Reply ohnmar December 27, 2012 - 3:40 pm သမ္မတကြီးရဲ့မိန့်ခွန်းကိုတော့လေးစားပါတယ်။သမ္မတကြီးလည်းလူကောင်းတစ်ယောက်
Reply ပါကြီးဖိုး December 27, 2012 - 11:23 pm သမတရဲ့ Good Governance, Clean Government ကြွေးကြွော်မှုအပေါ် လူတွေ ရိုးအီစပြုလာပါတယ်။
….အစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းများရဲ့ စီမံအုပ်ချုပ်မှုစနစ် တိုးတက် ကောင်းမွန်အောင် ပြုပြင်ပြောင်း လဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ကို နိုင်ငံတော် ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု အတွက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး မဟာဗျူဟာ တတိယ အဆင့် လုပ်ငန်းအဖြစ် သတ်မှတ် အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်သွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်။….လို့သမတရဲ့မိန့်ခွန်းမှာတွေ့လိုက်ရတာကြောင့် လက်ရှိပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးတစ်ချို့ရဲ့ အဂတိလိုက်စားမှုသတင်းတွေ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်ထွက်နေမှုအပေါ် သမတရဲ့ ကိုင်တွယ်မှုကို စိတ်ဝင်တစား စောင့်ကြည့်ချင်ပါတယ်။
Reply swe htwe December 29, 2012 - 7:08 pm That’s right.
Reply မြန်မာပြည်သား December 31, 2012 - 5:59 pm The President shoud show his wellingness to fight corruption. Especially should investigate connection between MIC Chairman and his new generation allies in government.
I suspect that he ve took multimillions USD from government during New Government Era.
Reply ဗမာ January 1, 2013 - 12:00 pm လက်ရှိအစိုးရဟာ အစိုးရ အုပ်ချုပ်ရေး ယန္တရား ပြုပြင်ပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားနေသလား၊ မကြိုးစားနေဘူးလားဆိုတာ ဝေးဝေးကြည့်နေဘို့မလိုပါ။ အောက်ခြေအနိမ့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်တဲ့ ရပ်ကျေးအုပ်ချုပ်ရေးမှုးရွေးချယ်မှုအဆင့်မှာတောင် ပြည်သူတွေကိုယ်တိုင် လွတ်လွတ်လပ်လပ်စွာရွေးချယ်ပိုင်ခွင့် မရှိတာဗျာ။ ကျန်တဲ့သူထက်ကြီးတဲ့အဆင့်တွေကိုတော့ဖြင့် ပြောဘို့ကိုမလိုတော့ဘူးထင်တယ်။
သမ္မတကြီးအနေနဲ့ ဒါတွေကိုလေကုန်ခံပြီး ပြောနေမဲ့အစား ပြဿနာတွေတက်နေတဲ့ အောက်ခြေကိုဆင်းပြီး ပြည်သူတွေအပေါ် မေတ္တာစေတနာအပြည့်နဲ့ ကူညီဖြေရှင်းပေးမယ်ဆိုရင်ဖြင့် အိမ်တိုင်းရဲ့ဧည့်ခမ်းမှာ ဘယ်သူမှတိုက်တွန်းစရာမလိုပဲ သမ္မတကြီးရဲ့ဓါတ်ပုံဟာ ရွှေရောင်ဘောင်ကွပ်နဲ့ ခန့်ခန့်ကြီးနေရာယူနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတာယုံကြည်လိုက်ပါ။ လေကိုလျှော့ပြီး ထိရောက်မဲ့လက်တွေ့ဆန်တဲ့ အလုပ်တွေကိုဦးစားပေးလုပ်ဘို့ တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။